Diyaaradaha Drones - Wararka Gadget | Wararka Gadget
Haddii aad raadineyso macluumaad ku saabsan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, markaa qaybtani waa sida saxda ah ee aad u baahan tahay. Dhammaan wararka ku saabsan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, moodooyinka cusub ee suuqa ku dhacay, ayaa ugu fiican tijaabinta iyo falanqaynta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Isbaanishka oo laguu qaabeeyey adiga.
Waxaan falanqeyneynaa oo tijaabinnaa diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee nooc kasta leh, laga soo bilaabo diyaaradda ugu yar ilaa tan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ugu dhaqsaha badan suuqa iyada oo loo marayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ama moodeellada kale ee loogu talagalay dadka isticmaala horumarsan.
Wararka Drone iyo tijaabooyinka
Waa kuwan Wararkii ugu dambeeyay iyo tijaabooyinka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo lagu daabacay Qalabka 'Actualidad Gadget'. Waxaan rajeyneynaa inaad jeceshahay iyaga!
Falanqaynta Splashdrone 3 + ee Isbaanishka, diyaaradaha aan biyuhu karin ee SwellPro
by Michael Gaton samee 2 sano .
Maanta waxaan kuu keenaynaa barnaamijka 'Actualidad Gadget' ee dib u eegista SwellPro's Splashdrone 3 + drone, oo ah diyaarad bilaa biyo ah oo awood u leh inay duusho ...
Falanqaynta Diyaaradaha Dagaalka ee Star Wars
by Michael Gaton samee 4 sano .
Sida taageere fiican u ah sheekooyinka 'Star Wars', tijaabada diyaaradahaan waxay ahayd wax gaar ah. Maya…
Falanqaynta Autoflight VR Drone
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa falanqeyn ku saabsan diyaarad aan duuliye laheyn oo aan tijaabinay dhowr toddobaad. Magaceedu waa VR Drone ...
Waxay ahayd sir qarsoon in muddo ah ugu dambayntiina waa la xaqiijiyay. GoPro waxay xireysaa qeybteeda ...
Saldhigyada shatiyada ee Amazon ee loogu talagalay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee xamuulka, tareennada iyo maraakiibta
by Ruben gallardo samee 5 sano .
Taasi Amazon waxay rabtaa inay wax ka bedesho nidaamka gudbinta ee xirmooyinkeeda, waa xaqiiqo. Ayaa doonaya inuu ku sameeyo ...
Amazon waxay bixisaa faahfaahin ku saabsan sida ay ugu talagashay inay ugu qaybiso iibsigaaga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
by Miguel Hernández samee 5 sano .
Jeff Bezos wuxuu ku dhexjiray hal abuur hal abuur dhowr sano hadda ah oo aynaan qiyaasi karin, milkiilaha wax iibsiga ...
Davos World Economic Photo waxaa ilaalinaya hubka lidka diyaaradaha
by Qolka Ignatius samee 5 sano .
Kani waa barta tiknoolajiyada iyo tixraaca kaliya ee aan ku sameyn karno dhaqaalaha wuxuu la xiriiraa mid ...
Falanqaynta Wareejinta Baqbaqlaha, nus diyaarad nuuca aan duuliyaha lahayn ah
by Michael Gaton samee 5 sano .
Markan waxaan kuu soo qaadaneynaa falanqaynta Sariirta Baroolka, minidrone-ka cusub ee soo saaraha baqbaqaaq iyo inay na siiso ...
Falanqaynta Microdrone Smartview VR
by Michael Gaton samee 6 sano .
Ka faa’iideysiga Kirismaska ​​ayaa soo dhowaanaya, maalmaha soo socda waxaan kuu soo bandhigi doonnaa dhowr dib u eegis oo ku saabsan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn labadaba ...
Waxaan ku tijaabinay Bebop 2 SkyController
Maanta waxaan idiin soo gudbineynaa falanqaynta Bebop 2, oo ka mid ah diyaaradaha digaaga loo yaqaan 'Parrot drones' oo ah kan ugu hadal haynta badan ...
Hexadrone skyview wifi, falanqayn buuxda
Haddii aad u jeceshahay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, maanta waxaan kuu keenaynaa wifi-ga 'Hexadrone skyview wifi', oo ah nooca aan duuliyaha lahayn ee sida ...